DAAWO Muuse Suudi Shidaalka inladhacaa larabaa – Kismaayo24 News Agency
DAAWO Muuse Suudi Shidaalka inladhacaa larabaa
by admin 7th January 2020 0254
Senator Muuse Suudi Yalaxow oo shalay hadal ka jeediyey fadhigii golaha Aqalka Sare ee lagu ansixiyey sharciga Batroolka dalka, ayaa soo jeediyey in ansixinta sharcigan lala sugo dowlad xoog leh oo damaanad qaadi karta.
Senator ayaa sheegay in mar walba ay muhiim tahay in lasoo saaro Batroolka dalka, balse aysan suurta gal aheyn in hadda lagu deg dego, iyadoo uusan jirin sharci lagu heshiiyey oo lagu hago Batroolka, isla markaana aysan sharcigan raali ka aheyn dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, sida Somaliland, Puntland, Galmudug iyo Jubbaland.
Senator oo hadalkiisa sii watey ayaa golaha ka hor yiri, “Sharcigan waxaa laga rabaa in warqadii laga soo saxiixay Golaha Shacabka, laga saxiixo golahan Aqalka Sare, kadibna loo geeyo Madaxweynaha ee markuu saxiixo Ra’iisul Wasaaruhu u geeyo shirkado lacag kaliya looga rabo”.
Aqalka sare ee baarlamanka Soomaaliya ayaa shalay ansixiyey Sharciga Batroolka dalka oo muhiim u ah Soomaaliya, si ay usoo saarato kheyraadka shidaalka ee la rumeysan yahay inuu dalka ku jiro.
DAAWO Maamulka Hawada oo laga cabsi qabo in dib loola wareego
Daawo: Farmaajo oo Madaxtooyada kula kulmay Qoyska Marxuum Tahliil oo Baabuurta Ilaalada Madaxweynaha ay Dileen
Dowladda Somalia oo Abuu Mansuur u diiday in uu isku soo sharaxo Doorashada Koonfur Galbeed
War Cusub: Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom oo u ruqaansaday deegaanada ay shabaab ka maamulaan gobolka …..
Tifaftiraha K24 5th June 2017